I-Riverfront yeeNdwendwe suite enombono omangalisayo - I-Airbnb
I-Riverfront yeeNdwendwe suite enombono omangalisayo
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguKen & Cheryl
A yabucala RIVERFRONT kwinqanaba elisezantsi guest suite ezibekwe kwi Humber Valley entle imizuzu nje ukusuka Corner Brook. Yonwabela enye yezona mbono zibalaseleyo eNtshona Newfoundland ngomnyango wakho wabucala wokungena nje amanyathelo ukusuka kuMlambo iHumber. Ngamagumbi amabini okulala, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela kunye nendawo yokuhlala enebhedi yokutsala, le suite ifakwe ngokupheleleyo kwaye ihonjiswe ngokumnandi. Inye into engekhoyo nguwe!
Le ndawo yomlambo ineembono ezimangalisayo unyaka wonke. Kukuhamba umgama ukuya kwindawo yeMarble Mountain Ski, ukuloba iisalmon, ukukhwela ikhephu, ukukhwela intaba, i-zip line, kunye nokuhamba ngesikhephe. Kwaye ukuhambo olufutshane nje ukuya eCorner Brook, iGros Morne National Park, igalufa, kunye nokubona okubandakanya ii-icebergs kunye nokubukela iminenga (ngexesha lonyaka). Indawo yeendwendwe ikwinqanaba elisezantsi, kwaye ifikeleleka ngesango labucala elijikeleze ngasemva. Ibandakanya amagumbi amabini okulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala eline-sofa yokutsala.
36" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.89 · Izimvo eziyi-96
ISteady Brook yindawo encinci ezolileyo malunga nemizuzu esi-8 ukusuka eCorner Brook ecaleni kweNtlambo entle yaseHumber. Ibekwe phakathi kweNtaba yeMarble kunye noMlambo iHumber ibonelela ngokufikelela ngokukhawuleza kuyo yonke into eNtshona Newfoundland.
Umbuki zindwendwe ngu- Ken & Cheryl
Siya kufumaneka ngokobuqu kunye nefowuni, i-imeyile okanye isicatshulwa ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corner Brook